Gbasara Anyị - Nanjing Skypro Rubber & Plastic Co., Ltd.
Nanjing Skypro Rubber & Plastic Co., Ltd., bụ onye nrụpụta ọkachamara na-eduga n'ịmepụta, na-ebupụ ma na-ebupụ ụdị roba na eriri plastik gụnyere mpempe akwụkwọ roba, mpempe akwụkwọ roba, taịlị roba yana ngwaahịa ndị ọzọ na-adịghị ahụkebe.
Ngwaahịa anyị sitere na mpempe akwụkwọ roba azụmaahịa na akarare ọpụrụiche gụnyere EPDM, Silicone Rubber na Fluorine Rubber (Dupont's Viton), anyị na-etinyekwa na mpempe akwụkwọ ndị ọzọ dị ka Natural Rubber, SBR, NBR, nke nwere acid-resistance acid na alkali- A na-enye akara ule niile dị n'elu n'ọtụtụ agba iji bulie arịrịọ ndị ahịa anyị.
Igwe ọrụ ọkụ (PU, PE, TPU, TPEE, silicone, Teflon) na-ebu ọkụ (mbufe, nnyefe) eriri bụ akara ngwaahịa ọhụrụ nke anyị malitere afọ abụọ gara aga, bụ nke a na-ejikarị eme ụlọ maka ịhazi ụtaba, ngwa ngwa, osisi , okwute, ngwa elektrọn, akwukwo nri na nri nri. Anyị na-enwe ike inyocha, chepụta, wụnye ma dozie ihe eji eme ebu na ebu n’uche maka ngwa ndị pụrụ iche.
Anyị elu mkpara na injinia nọgidere na-eweta ahịa anyị asọmpi price, adịchaghị mma, nakwa dị ka na-echebara mgbe-ire ọrụ. Ngwa ahịa ahịa anyị ruru ihe karịrị mba iri atọ na-ekpuchi South East Asia, North America, Europe na mpaghara ndị ọzọ n'ụwa niile.